Ngadlula iminyaka engaphezu kweshumi kusukela ukubukeka le Funny uqala. Phakathi nalesi sikhathi, le ndlela iye yashintsha kangangokuthi uye waba cishe isici-ocebile efanayo, njengama-computer. Ngakho-ke, umuntu alummangazi umbuzo, indlela ukuhlanza ifoni yakho kusuka amagciwane.
Yini bafinyelele lowo ukuqalisa malware?
Njengoba sekunama-inani elikhulu izinhlelo khulula ukuthi ungalanda efonini ephathekayo, kubaduni baye baba wahlanganyela ukuthuthukiswa amagciwane ezingaba Isikhunta "sihlasela" ifoni. malware Embedded kungaba liphazamisane nomsebenzi we-smartphone, ukuchitha kuso imisebenzi ehlukahlukene, kuhlanganise leyo eyisi- zezimali. Uma ifoni "babanjwa" yilo igciwane, ungasebenzisa kalula sesiyodonsa kusuka akhawunti yasebhange kuboshelwe omunye akhawunti ku-inthanethi.
I-Malware, ngikutholile yeselula alibonisi uqobo. Abahlaseli uwaphathe ngokusebenzisa umyalo kwenziwe ukude.
Indlela uhlole ifoni yakho amagciwane ngokusebenzisa ikhompyutha?
Ukuze "catch" uhlelo enonya, wena umane download kufayela yakho yefoni yeselula equkethe izikripthi yingozi. Ngaphezu kwalokho, ama-virus ngokuvamile "catch" abantu ngenkuthalo ukusebenzisa ama-e-mail. Kulokhu, inkathazo ingena kudivayisi ngokushesha njengoba umsebenzisi kuvula incwadi, kuphawulwa uhlelo njengogaxekile.
Ngaphambi ukususa igciwane kusuka efonini yakho, udinga ukuqinisekisa ukuthi ngempela kukhona. Lokhu kungenziwa kusetshenziswa yedeskithophu noma ikhompyutha ephathekayo. Uxhumano senziwa nge ikhebula ozinikele, operation ukuvumelanisa izinhlelo ezimbili. Inqubo yokuqinisekisa azoboniswa ku "Computer yami". Ngaphambi ukuhlanza ifoni yakho kusuka amagciwane, kubalulekile ukuba scan imemori khadi. Lokhu kungenziwa ngokuchofoza isithonjana efanele. Inqubo yokuqinisekisa kuthatha imizuzu embalwa. Emva kwalesi sikhathi, qapha ubonisa uhlu lwamafayela eziye zabangela izinkinga.
Indlela ukususa igciwane kusuka efonini yakho?
Ukuqeda malware, ukubonakala emva kuthwetshulwa Antivirus, kumelwe uchofoza "okwelapha zonke", esivela eduzane amafayela 'itheleleke. Ngaphezu kwalokho, bonke abathanda, indlela ukuhlanza ifoni yakho kusuka amagciwane, kuyasiza ukwazi mayelana nokuba khona kwamakamu enye indlela yokususa malware. Kodwa ngemva umsebenzisi kwenza ukusetha kabusha kumasethingi factory, evela efonini ephathekayo uzonyamalala wonke ulwazi olugcinwe kwi-ke. Ngokushesha ngemva kwalokho, udinga ukufaka uhlelo unqulo wesi arab kusuka futhi ukuxilonga.
Ngezinye izikhathi, leli gciwane uhlala kwisitoreji semidiya esikhiphekayo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ukuhlanza ucingo amagciwane, kunconywa ngaphandle kwakhe ukuskena imemori khadi for nokwethenjelwa okukhulu. Lokhu kungenziwa umshini umile ngosizo efakazelwe-anti-virus hlelo.
Indlela ukufaka-anti-virus Uhlelo umakhalekhukhwini?
amadivaysi eziningi zanamuhla zidayiswa ne Ukuvikelwa zangaphambi olufakiwe. Kodwa labo amafoni wabo azinalo uhlelo elula, kutuswa ukuyifaka wena. Ukuze wenze lokhu, hamba uye website elifanele bese ulanda antivirus ezifanele. Lezo zinhlelo ingashintshwa ngokugcwele zamadivayisi eselula. Abenzi kuphela ukuvikela ifoni yakho kuzo zonke izinhlobo ukuhlaselwa hacker, kodwa futhi ngesikhathi esifanele ukuthola ukuqeda amagciwane. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlelo bayakwazi ukuvimba izingcingo izinombolo premium SMS osolisayo. Thola kulo msebenzisi antivirusnik ngisho ngephutha baxhumane amaseva esiyingozi futhi akusho aphendule "elinegciwane" ucingo.
Indlela yokugwema "ukungcoliswa" Ifoni amagciwane?
Ukuze ugweme ukuwela okungagunyaziwe malware yeselula, udinga ukulandela izimiso ezimbalwa ezilula. Okokuqala, udinga uvale ikhono ukulanda isofthiwe kusuka kunoma iyiphi amasayithi engathembekile. Isinyathelo esilandelayo ukufaka isimiso esihle unqulo wesi arab. Futhi kanjalo, ungalilahli ukunganakwa updates njalo software ekhona. Labo ungafisi ifoni yabo ithole igciwane, kutuswa ukuba ugweme ukufunda i-SMS utholakele futhi MMS-mail. Ngokuvamile "ukungcoliswa" yiso nge e-mail.
It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa "Imodi yonjiniyela" futhi kulanda software yakho idivayisi kusukela kumithombo engathembekile. Zonke isofthiwe kumele ukufakwa kusuka kumasayithi ezisemthethweni kuphela. Ngo inqubo kokufaka kubalulekile ukuqapha eduze imiphi imininingwane icelwe hlelo. Uma kungenzeka, kutuswa ukuba unike amandla ukubethela umsebenzi kanye nokuvikelwa idatha yomuntu siqu. Ngezinye izikhathi lesi sifo kungavuka ngenxa yokuxhuma ifoni kukhompyutha ubanjwe igciwane. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukuthi uxhume Smartphones PC omethembayo kuphela. Futhi, ngokukhulu ukucophelela okufanele zithathwe ukuze ukusetshenziswa okungaphephile-Wi-Fi. Esebenzisa i-internet mahhala, futhi basakaza ezindaweni zomphakathi, kungcono uyeke libambe kwemali.
Kuhle ishaja ephathekayo ye-iPhone 5
Jegudiel - ingelosi eyinhloko onika ukwesekwa ukuze noma ubani ofuna ukuba dumisa kho Lord yethu
Lutsk castle, noma inqaba of Westminster: incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo